Zvinoenderana neichi (kwete chitsva) mufananidzo, iyo iPhone 7 Plus inogona kuve neiyo 4K skrini | IPhone nhau
Zvinoenderana neichi (kwete chitsva) mufananidzo, iyo iPhone 7 Plus inogona kuve neiyo 4K skrini
Apple payakatangisa iyo iPhone 6 uye iPhone 6 Plus isu tese takanzwisisa kuti paizove nemhando yepamusoro uye imwe shoma. Iyo 5.5-inch modhi yakapa kuzvitonga kuzere uye, zvakanyanya kukosha, Optical Image Kudzikamisa (OIS). Asi misiyano yeaya mamodheru inogona kuita kunge isingakoshi kana tikazvienzanisa ne3GB ye RAM, iyo Smart Connector, iyo mbiri kamera uye, chekupedzisira asi chisiri chidiki, chidimbu chekupedzisira cheruzivo icho chinoona kuti iPhone 7 Plus ichave zvakare 4K kuratidza.
Nezuro yakaonekwa paWeibo, inozivikanwa seChinese Twitter, iyo inofungidzirwa kumberi mapaneru eiyo iPhone 7. Kana iyo mufananidzo iri yechokwadi, iyo iPhone 7 Plus ichave iine Quad HD skrini kana, mune yakaipa kesi, 2K. Zvakare kana iwo mufananidzo uri wechokwadi, iyo skrini ye iPhone 7 ichagara yakafanana 1.334 x 750 resolution izvo zvatove zviripo muiyo iPhone 6s. Uku kuwedzera kwaive chimwe chezvinhu zvitsva zvinotarisirwa pamusi wegumi wegumi iPhone.
Iyo iPhone 7 Plus yaizove ne 2K kana 4K skrini
Rimwechete remapaneru ratinoona mumufananidzo wekare raizogadzirwa ne Japan Display, Imwe yemakambani anoshandirwa naApple kugadzira mapaneru epamberi emidziyo yayo.
Asi pane chinhu chimwe chinondirova zvakanyanya. Mufananidzo wekare wakangofanana neiya yatakaburitsa mwedzi mishoma yapfuura iyo yakaita kuti tifunge kuti iyo iPhone 7 yaizosvika yakajairika, Plus uye Pro mamodheru, mukana uri kurasikirwa nesimba nekufamba kwemazuva. Ndokunge, mufananidzo uri pamusoro Zvinogona kunge zviri zvechokwadi, asi hazvisi zvitsva.
Semazuva ese, isu tichafanira kuramba takakahadzika kusvika panguva iyo Apple inosuma iyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus. Handikwanise kufungidzira kambani yakaita seApple ichiwedzera kugadzirisa kwescreen zvakanyanya kubva kune rimwe gore kuenda kune rinotevera, uyezve kana tichifunga kuti kuzvitonga pamwe nekuita kunogona kukanganiswa. Unozviona sei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Zvinoenderana neichi (kwete chitsva) mufananidzo, iyo iPhone 7 Plus inogona kuve neiyo 4K skrini
Iyo iPhone 6S haina 1080p resolution. Zvishoma zvakanyanya kufadza ndapota.
Kuti mupepeti wenhau dze iPhone dzinoti iyo iPhone 6s ine 1080p ine mhosva.
Kutengesa kweIphone kunokura munenge pasirese pasirese, kunze kweSpain
Idzi ndidzo nhau dzakasvika neIOS 10 beta 5